Rakotoarisoa Jean-Eric: “Aorian’ny fianianan’ny filoha ny famindram-pahefana” | NewsMada
Rakotoarisoa Jean-Eric: “Aorian’ny fianianan’ny filoha ny famindram-pahefana”
Hiroso amin’ny fanaovana fianianana ny filohan’ny Repoblika vaovao. Aorian’izay vao hatao ny famindram-pahefana, araka ny fanazavan’ny filohan’ny HCC.
“Aorian’ny fianianana no hatao ny famindram-pahefana. Ny filoha teo aloha ny Repoblika sy ny filoha vaovao ny Repoblika no manao ny famindram-pahefana. Rehefa vita ny fianianan’ny filoha vaovao ny Repoblika vao tena filohan’ny Repoblika izy.”
Io ny fanazavan’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), Rakotoarisoa Jean-Eric, omaly, momba ny famindram-pahefana amin’ny filoha vaovao ny Repoblika. Manomboka amin’izay fahavitan’ny fianianana izay no mandray ny asa izy. Amin’izay fandraisany asa izay no hatao ny famindram-pahefana.
Diso ny natao taloha hoe alohan’ny fianianana ny famindram-pahefana. Tsy mety raha olona tsy mbola tena filoha no amindrana fahefana. Alohan’ny famindram-pahefana, tokony hampahafantarina ny filoha vaovao ny Repoblika ny zava-mitranga rehetra eto anivon’ny firenena.
Fifanarahana amin’ny vahoaka ny fianianana
Atao eo anoloan’ny HCC ny fianianan’ny filohan’ny Repoblika. Eo koa ny andrimpanjakana sy ny fitsarana tampony ary ny vahoaka malagasy. Ny maha zava-dehibe azy: fifanarahana ny fianianana, indrindra eo anoloan’ny vahoaka malagasy. Tsy hoe fombafomba izany fa tokony hanaja ny fianianana ny olona nanao azy. Misy dikany sy lanjany io satria fifanarahana.
Lafiny faharoa, araka ny lalàmpanorenana: mandray ny asany aorian’ny fianianana ny filohan’ny Repoblika. Eo no manomboka ny fe-potoam-piasany. Hifarana amin’ny 19 janoary 2024 izay. Afa-manara-maso an’izany ny rehetra. Misy dikany ny fianianana fa tsy ataotao fahatany.
Tsy misy Baiboly io, tsy misy lakile: tsy misy na inona na inona. Lanonana repoblikanina ny fanaovana fianianana, tsy misy fivavahana. Tsy maintsy hajaina ny maha laika ny Repoblika, araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana. Tsy tokony hisy fanompoam-pivavahana na ny toy izany io fotoana io, lanonana manan-kaja fa tsotra.
“Tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy: lanonam-pitsarana manetriketrika ny fanaovan’ny filoha vaovao ny Repoblika fianianana”, hoy izy.